त्यसैले स्तर 27 innocently पर्याप्त बन्द सुरु, एक सानो 'मैट्रिक्स albeit’ यो निलम्बित ब्लक संग. बुट गर्न उद्धार पशुहरूको सही नम्बर र ताराहरूको एक सभ्य नम्बर संग यो चरण माध्यम रही लागि केही चलाउन सजिलो सङ्केत र सुझाव छन्!
पहिलो सबै को आफ्नो राम्रो जान्छन् मात्र एक समयमा एउटा तल आउन भनेर थाह, आफ्नो घरपालुवा अटक छ भने चिन्ता बोर्ड को अन्य पक्षमा अब तल ल्याउन प्रयास लाग्दैन, यो सिर्फ काम अभ्यस्त. आफ्नो घरपालुवा एक अचार मा छ भने प्रयास र यो वरिपरि ब्लक सामेल वा केही ठूलो Combos लागि लक्ष्य र एक firecracker प्रयोग!
बुद्धिमानीसाथ आफ्नो बेलुन प्रयोग! त्यहाँ यो बोर्ड मा वरिपरि हालियो एकदम केही रंग बेलुन हो र तिनीहरूले धेरै चलाउन सजिलो हुन सक्छ. आफ्नो घरपालुवा मुनि ब्लक खाली गर्न वा एउटै रंग ब्लक को बैंक माथि सामेल तिनीहरूलाई प्रयोग. केही ठूलो Combos बनाउन एक गुब्बारा प्रयोग भन्दा राम्रो मात्र कुरा दुई प्रयोग गर्न छ (विभिन्न रंग …स्पष्ट!)
निलम्बित ब्लक कसैलाई?
यो स्तर चाल को एक सीमित संख्या छ बिर्सनुहुँदैन, 60 तपाईं र वास्तवमा 8 जान्छन् त उद्धार र 'dilly dally राख्न’ एक न्यूनतम, पहिलो व्यापार हेरविचार, यो एक खेल छैन नाटक को आरंभ छ!
सधैं रूपमा Firecrackers आफ्नो मित्र हो, तपाईं एक प्रयोग कमाउन भने यो एक घरपालुवा तल ल्याउन, यो वा 'वर्षाको दिन बचत छैन धेरै बिन्दु’ तपाईं महसुस अघि तिमीहरूमा हुनेछ!
ठूलो अंक एक रंग को सबै हटाउन उद्देश्य, बेलुन यस गर्न आवश्यक चलाउन सजिलो तर छैनन्. यो बचाव गरिब सानो जान्छन् आफ्नो प्राथमिकता छ तीन तारा राम्रो छ स्कोरिङ तर मनमा राख्न! बस एक समयमा एउटा स्तम्भ काम र तपाईं यस कुनै समय मा गरेको हुनेछ. तपाईं यस भन्दा बायाँ केही चाल छ भने आफ्नो स्कोर गर्न थप हुनेछ वा तपाईं त माथि आफ्नो घरपालुवा सेट केही बुँदा स्कोरिङ मा काम गर्न सक्छन्. गुणक ब्लक लागि खुला तपाईं आँखा राख्न! तपाईं सँगै केही संयोजन विशेष भने तिनीहरूले आफ्नो स्कोर गर्न एक ठूलो फरक बनाउन सक्छ!
एक रंग तर सबै हटाउँदै स्कोरिङ केही ठूलो अंक लागि बनाउन सक्छ!